Nifarana ny ”Opération Mandio”: jiolahy telo maty, 33 voasambotra, 15 naiditra am-ponja | NewsMada
Nifarana ny ”Opération Mandio”: jiolahy telo maty, 33 voasambotra, 15 naiditra am-ponja
Azo lazaina ho nahafa-po ny vokatry ny ”Opération Mandio” nataon’ny zandary, tany amin’ny faritra Atsinanana, araka ny nambaran’ny komandin’ny vondron-tombim-pileovan’ny zandarimariam-pirenena, faritra Atsinanana, ny kolonely Ranaivoarisoa Theodule.
Nifarana ny 8 oktobra lasa teo ny “Operation Mandio”, hetsika nanerana ny Nosy nataon’ny zandarimariam-pirenena ho fanadiovana ny asan-jiolahy mialoha ny fampielezan-kevitra. « Ny hetsika manokana itovizan’ny zandarimariam-pirenena no mifarana fa ny zandary ato anatin’ny faritra Atsinanana, hanohy ny atao hoe ”Hetsika anaty lalam-pasika sy an’elakela-trano” rehetra eny”, hoy ny kolonely komandin’ny vondron-tombim-pileovan’ny zandarimariam-pirenena Atsinanana, Ranaivoarisoa Theodule. Na izany aza, mahatsiaro ho afa-po tamin’ny fanatanterahany ny asany ny zandary nandritra ny ”Hetsika Mandio”, ”nisy ny vokatra”, hoy izy satria nahatratra telo ny jiolahy maty ka anisan’ izany ny tao Ambalamanasa, i Talata Bernard, 22 taona, lehiben’ny “Bande des 11”. Faharoa, mpitondra posy nandroba ny olona nentiny ihany ka tratran’ny fitsaram-bahoaka teny Mangarivotra ny 3 oktobra lasa teo, ary ny fahatelo ny tany Mahanoro.
Miisa 33 kosa ireo olona voasambotra tamina raharaha maloto sy fandikan-dalàna isan-karazany ka naiditry ny fitsarana am-ponja vonjimaika ny 15 tamin’ireo raha nahazo fahafahana vonjimaika kosa ny 12 ary ny enina hafa, mbola hanaovana fanadihadiana lalina. Manodidina ny 30 kosa ireo tsy maintsy mandoa lamandy ary miisa 10 ny olona nahazo fampitandremana. Nahatratra hatramin’ny 40 ny fiara tsy maintsy nongiazana fa tsy mazava eo amin’ny fampiasana azy raha roa ny moto. Ireto farany izay fampiasan’ireo jiolahy amin’ny fanafihana mitam-piadiana.
Voasambotra ireo mpanafika tao Anjahamany sy Andranobolaha
Efa nisy tratra ireo nanafika tany Anjahamany sy Andranobolaha. Renim-pianakaviana roa voalaza fa mpanatitra sakafon’ireo jiolahy raha miafina any anaty ala. Raha ny fanazavan’ny kolonely Ranaivoarisoa Theodule hatrany, misy fikambanan’ny tantsaha atao hoe “Voamamy” amin ‘ireo kominina ambanivohitra telo : Anjahamany, Andranombolaha ary Ambalarondra izay samy anatin’ny distrikan’ i Brickaville.
“Tsy jiolahy ny havanay”
Namaly bontana ny zandary sy ny olona mitonona ho sefo fokontany nanao tondro molotra an’i Talata Gervais, matin’ny zandary ny alin’ny alahady teo ny zokiny, Atoa Gervais Bernard, raha nihaona tamin’ny mpanao gazety etsy amin’ny Hopitalibe nandritra ny
fahitan’izy ireo fa havan’izy ireo tokoa ny matin’ny voatifitry ny zandary. Ireo farany izay nanamafy fa hitory ilay nitondra zandary tao an-tokantranon’i Talata Bernard. “Hitory izahay, ary ilay olona mitonona ho sefo fokontany nefa tsy sefo fokontany ao Ambalamanasa akory izy fa nanao tondro molotra satria ity olona ity no nitarika zandary tonga tao an-tokantranon’ny rahalahiko, ny alahady tamin’ny 5 ora maraina ary nisambotra azy. Maty izy ary bala efatra ny hitanay amin’ny vatany”, hoy Atoa Gervais Bernard. Andrasana ny tohin’ny raharaha.